Ny fanaovana raharaham-barotra ao amin'ny Golfa Arabo dia mitaky mpisolovava orinasa | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny rafitra ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fanjakana Arabo dia tsy mitovy amin'ny an'i Eoropa na i Amerika, ka izany no ilàna olona hanakarama mpisolovava orinasa any UAE raha liana hanao raharaham-barotra izy. Ny lalàna voafaritra arakaraka ny fenitra maoderina dia eo am-piandohan'ny fotoana. Ny ladoany dia mazàna manan-danja kokoa amin'ny toe-javatra sasany noho ny lalàna voasoratra. Azonao atao ny manana fifanarahana maso ivoho miaraka amin'ny masoivoho, manana fehezan-dalàna hamaranana ny birao amin'ny fepetra voafaritra tsara, saingy sarotra be ny mamarana ny fandaminana na dia mifaly aza ny fanjakana.
Fankatoavana ireo fivoriambe naharitra dia ilaina amin'ny famoronana fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, ny fanehoana fanazaran-tena fanetren-tena, hatsaram-panahy, fitadiavana voninahitra, ary ny fahononam-po, ny fahamarinana, ny fanetsiketsehana ny tanana, ny fifandraisan-davitra ary maro hafa.
Ny fihetsika sasany sy ireo fomba amam-panao ireo dia antitra noho ny Silamo, satria mety ho avy amin'ny kolontsaina tany Moyen Orient izy ireo. Ny fomba amam-panao toy izany dia mety hanampy amin'ny fanatanterahana fifanarahana miaraka amin'ny mpanjifanao izay tokony ho izy ary tsy maintsy omena lanja. Aza mihinana na misotro mandritra ny volana Ramadany eo alohan'ny silamo. Volana fifadian-kanina ity, ary ny zoma no fialan-tsasatra silamo; ny asa dia tanterahina hatramin'ny alakamisy na alarobia. Aza manelingelina ny Silamo mihitsy.
Tahaka ny any Amerika, ny olona iray dia tsy afaka mieritreritra ny mpandraharaha iray any Afovoany Atsinanana manana ny fenitra mitovy aminy etika momba ny fandraharahana, kaonty, ary koa ireo mpisolovava amin'ny orinasa satria ny faritra dia tsy manatona ny fomba tena mitovy amin'ny olana ara-etika. Ilay teny hoe "varotra iraisampirenena" dia toa tsara, saingy tsy hanana ny dikany mitovy amin'izay ampifandraisin'ny olona aminy. Mpisolovava avy any ivelany izay mifantoka amin'ny fandikana ny statutory dia mety tsy hampihena ny fanadihadian'ny tena izy sy ny fitsikerana olana fa tsy mahazatra mpisolovava orinasa voaofana. Raha eo amin'ny sehatry ny fananana ara-tsaina, ny firenena Afovoany Atsinanana rehetra dia tsy nanana fotoana hahatakarana ny dikany marina.
Amin'ny tranga fialamboly, ny mpanjifa iray dia manandrana mitady ny mpamokatra tononkira iray izay avy any Libanona mba hahafahana mifampiraharaha amin'ny fandoavam-bola amin'ny fampiasana ny sasany amin'ny feo izay novidiny tao amin'ny CD Big The Apple. Mampalahelo fa tsy hitondra ny anaran'ny mpamokatra na anarana ahazoana azy ny CD satria namidy toa tsy nahazoana alalana ilay CD.
Matetika, ny mpandraharaha vahiny / mpamatsy serivisy an'ny Amerikana dia mety hametraka marika amin'ny anarany mba hanafaingana ny raharaha, nefa aza avela hitranga izany. Ny orinasa amerikana dia tokony hanomboka fisoratana anarana amin'ny fizarana logo. Ny fahazoana fiarovana marika manerantany dia zava-dehibe tokoa, mitaky fandefasana patanty tsy miankina sy fangatahana marika ho fiarovana any amin'ny fanjakana rehetra.
Fiatrehana ny mpampanoa lalàna iraisam-pirenena
Ny lalàna nasionaly dia ataon'ireo mpisolovava amerikanina orinasa, fa ny orinasa izay manao raharaham-barotra dia tsy maintsy mitady torohevitra ara-dalàna miaraka amin'ny mpisolovava arabo iray izay nekena tamin'ny bara amerikanina izay hitondrana ny fandraharahana. Ny mpisolovava vahiny no manana fomba amam-panao ara-dalàna izay miavaka, fomba fijery izay manana fampianarana ara-pitondran-tena, fampianarana ara-dalàna ary miasa amin'ny fomba miavaka sy tsy fantatra izy ireo. Ireo mpisolovava tandrefana dia mety tsy takatry ny indostriao, ny orinasanao na ny taratasy fanoratana anarana. Mety ho nahalala momba ny asa anatiny ao amin'ny bureaus an'ny governemanta ao an-toerana izy ireo. Ny saram-panjakan'izy ireo dia ambany kokoa noho ny fiampangana mpisolovava amerikana iray. Ny fikatsahana haka torohevitra ara-dalàna vahiny dia mety ho azo any amin'ny masoivoho amerikanina any ivelany na amin'ny US Dept. of Commerce.
UAE Corporate Lawyer: Fifandraisana amin'ny serivisy / mpaninjara
Ny fomba fividianana indrindra any Moyen-Orient dia ny fanaovana solontena / mpivarotra varotra; karazana varotra hafa dia ny hanangana ny fisian'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa na fahefana amin'ny orinasanao eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana na franchising. Ireo mpanondrana amerikana manana tsipika miavaka dia mety hahita tombony amin'ny fanaovana mpamatsy mpamatsy na mpivarotra ara-barotra miavaka any amin'ny fanjakana isan-karazany. Maro ny orin'asa no mitantana tsipika vokatra maro, ka sarotra aminy indraindray ny miantsena am-pahombiazana ny vokatra rehetra.
Ny mpivarotra na ny ankamaroan'ny solontena dia aleony mitantana vokatra fotsiny. Ny fanjakana samihafa dia samy manana ny lalànan'ny maso ivoho izay ara-barotra. Ny lalàna sasany dia tsy mitovy amin'ny mpamatsy sy ny maso, izay manondro ny roa amin'ny solontenan'ny varotra. Ny fisafidianana ny agents na distributor mety no safidy lehibe indrindra, satria tsy mora ny famaranana ny fifanarahana tsy misy simba. Ny ankamaroan'ny orinasa amerikana dia nahita fa nandoa vola be mba hialana amin'ny fahatakarana, na inona na inona fenitra manokana momba ny fampisehoana, izay mety hifanarahan'ny antoko miaraka amin'ny mpisolovava orinasa.
Fanapahan-kevitra raisin'ny mpisolovava orinasa
Saingy ny ankamaroan'ny zava-mitranga dia tokony ho faran'ireo antoko, na ny fifandirana dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fifandirana. Ny fifandirana sasany dia mety hiteraka fitsarana.
Ny fahefan'ny fombafomba dia mihazakazaka. Tato ho ato dia tena nisy ny fanatsarana ny Emirates Arabo Mitambatra hanangana Konseho Customs, izay ny laharam-pahamehana dia ny hanangana ny sendikan'ny fomba amam-panao hampitambatra ny fitsipi-dàlana, ny fitsipiky ny fomba, ny fizotran-kevitra ary ny fanoratana any amin'ny UAE. Fandikana ny lalàna amerikana ny fandoavana vola ireo manampahefana tsy hivarotra vokatra any ivelany. Mampiasa paikady mahery vaika ny sampana Fitsarana mba hanadihady ny mety hisian'ny fihoaram-pefy nataon'ny Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).